Intros azo ovaina ho an'ny After Effects, tranokala ary tonian-dahatsoratra azo sintonina | Famoronana an-tserasera
Intros azo ovaina ho an'ny Adobe After Effects
Jorge Neira | | Fitaovana famolavolana, dia midika hoe
Araka ny fantatrao, ny Adobe After effects dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra amin'ny fiasana eo amin'ny sehatry ny vokatra manokana sy ny famokarana dizitaly aorian'ny famokarana. Ny iray amin'ireo manintona lehibe ananany dia ny fahaizana manodinkodina sombin-javatra maivana na miasa amin'ny endrika 3D ary mamela antsika hanambatra ny fampiasana azy tsara miaraka amin'ny fitaovana famolavolana avy amin'ny Adobe ihany koa. Afaka manafatra mora foana isika fisie amin'ny endrika .Psd na .Ai ohatra ary miasa amin'izy ireo, miasa miaraka amina sosona, saron-tava, fomba fampifangaroana ...
Noho izany rehetra izany, ny Adobe After Effects dia mety tena ilaina amin'ny famoronana lohateny, intro fandaharana, bilaogin-dahatsary na lohatenin'ny trosa. Ny fahaizany sy ny fitovizany amin'ny fitaovana Adobe dia mahatonga azy io ho fitaovana tena mahay, na dia mahatalanjona ihany koa ny halaliny na ny fahasarotany. Ka tsara foana manana referansa rehefa mamorona tetikasa vaovao ary maninona no tsy, torolàlana hiasa.
Avelako ianao intro folo azo ovaina sy azo sintonina izay azo ampiasaina hanentanana anao na hiasa amin'izy ireo, hanovana azy ireo ary hanararaotra ilay tetikasa noforonina mba hanampiana fanovana na koa hahitana ny rafitr'izy ireo mba hahatakarana bebe kokoa ny fiasan'izy ireo. Ho ahy manokana, indrindra amin'ny adventures nataoko voalohany tamin'ny fampiharana, dia tena nilaina ny niara-niasa tamina tetikasa azo ovaina. Ny ampahany tsara amin'ny safidy dia nesorina tao amin'ny pejy Modely DS izay misy loharanom-pahalalana ampy azo ampiasaina.
Sary famantarana amin'ny glossy sphere
1 Tranonkala hisintona intro azo ovaina
1.2 99 modely
1.6 Fihetsiketsehana mihetsika
2 Fandaharana hamoronana intro azo ovaina
2.3 Lightworks ho an'ny Windows, MacOS, ary Linux
3 Fampidirana azo ovaina ho an'ny youtube
Tranonkala hisintona intro azo ovaina
Zava-dehibe izany rehefa manomboka vaovao horonan-tsary, tetikasa na fampisehoana, manaova fampahalalana izay mamaritra ny fombanao sy ny marikao ary ny intro tsara dia mitaky fotoana sy fahalalana be dia be izay tsy ananantsika foana.
Ho an'izany dia manana tranokala marobe izahay izay azonay atao misintona modely azo ovaina.
Ireo modely ireo, amin'ny ankapobeny, dia manana kalitao avo lenta ary miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy monja dia azonao atao ny manamboatra azy ireo amin'ny sary famantarana, soratra, sns., Hahazoana intro tonga lafatra ho an'ireo horonan-tsarinao ao anatin'ny fotoana fohy.
Eto ambany dia asehoko anao ny sasany amin'ireto tranonkala ireto miaraka amin'ny atiny maimaim-poana sy maimaim-poana.
Tsy misy isalasalana, iray amin'ireo lehibe amin'ity indostria ity. VideoBlocks manana maodely mihoatra ny 7.000 misy ho an'ny fisintomana, izay azonao ampiasaina tsy misy olana satria izy rehetra dia manana fahazoan-dàlana mamela ny fampiasana azy ireo tsy misy fetra.
Miaraka amin'ny iray amin'ireo katalaogy lehibe indrindra ao free templates 99 Modely dia aseho amin'ny Internet, iray amin'ireo tranonkala tsara indrindra izay, ankoatry ny fanolorana karazan-karazany maro dia manondro izany Maimaimpoana tanteraka ny fitaovanao hampiasainao. Tsy izany ihany fa manome antsika safidy fanampiana maimaim-poana koa isika raha manana fanontaniana na olana rehefa mampiasa ny maodeliny.
Tranonkala tsara hahitanao modely marobe maimaim-poana, ao anatin'izany intro misy effets tsara be.
Iray amin'ireo tranokala fanovozan-kevitra amin'ny fisintomana modely, miaraka amin'ny karazany maro karazana sy kalitao tsara azo antoka, satria an'ny Shutterstock goavambe izy ireo.
Ho fanampin'ireo rakitra maimaim-poana, raha manana teti-bola ianao, dia aza hadino ny mitsidika ny faritra Premium mahaliana miaraka amina eo anelanelan'ny eo ho eo. 30 sy 40 Euros hanovana.
Tranonkala fampidinana modely tena mahafinaritra tokoa tsy manana maodely maimaimpoana ho an'ny intro, mety ho hitanay ny fomba tadiavinay ao amin'ny volavolan-dalanao.
Na dia tranokala Premium hanombohana azy aza dia manana modely fampidirana maimaim-poana misy ao amin'ny katalaoginy ary izany dia samy manana ny safidiny fisoratana anarana, izay miainga amin'ny safidy maimaim-poana mamela anao hisintona mankany amin'ny PRO, izay manodidina ny 45 euro dia manome anao hatramin'ny 20 fampidinana isam-bolana.
Iray amin'ireo olona goavan'ny horonan-tsary, miaraka amin'i Valiny clip 23.000 ho an'ny intro ary fisie efa ho antsasaky ny tapitrisa ny fisie azo ampiasaina hampiasana sy hanome aingam-panahy antsika.
Amin'ity indray mitoraka ity, misy modely azo aloa, manomboka amin'ny 4 Euros ka miova, fa na eo aza izany dia goavana ny karazany, noho izany dia mamporisika anao izahay hijery fa tsy dia lehibe ny vidin'ny vidiny ary afaka mahita sombin-tsarimihetsika manana kalitao sy vokany tena tsara ianao.
Fandaharana hamoronana intro azo ovaina
IMovie dia natao manokana ho an'ny Apple ary iray amin'ireo tonian-dahatsoratra mavitrika indrindra ho an'ny horonan-tsary, mifanentana amin'ny Mac rehetra ary azo ampiasaina tsy tapaka.
Ny rindrambaiko farany dia mamela ny maro safidy mandroso tsara kokoa, toy ny fanitsiana 4K sy horonan-tsary vitsivitsy avy amin'ny fitaovana ivelany, toy ny fakantsary GoPro sy telefaona finday, izay zavatra ilainay ny interface misy azy izay tena tsotra ampiasaina, madio sy intuitive.
Ny teboka tsara iray hafa dia ny ahafahanao manova avy amin'ny iPhone na iPad-nao. Misy ihany koa fomba hafa hanondranana singa hafa avy amin'ny YouTube na Facebook ary azonao atao amin'ny fomba samihafa, satria ity programa ity manana tonian-dahatsoratra fototra ho an'ny raki-peo, raha fintinina, ity editor ity dia tonga lafatra amin'ny fanaovana horonantsary an-trano sy tetikasa audiovisual kely.
Ity fitaovana ity dia tafiditra ao amin'ny Windows ary na dia tsy miaraka amin'ny Windows 10, mora ny misintona mba hamoronana horonantsary voalohany. Ny valiny dia mitovy amin'ny an'ny Final CutPro sy Adobe Premiere Pro.
Anisan'ireo zavatra misarika ny saintsika momba ny Windows Movie Maker ny mety hisian'izany manambatra horonan-tsary, feo ary sary, manapaha horonan-tsary ary asio effets manokana. Rehefa mampakatra ny clip-nao amin'ny tambajotra sosialy dia mora be izany ary ho an'ny tetikasa kely dia tsara izany, na dia miharihary aza fetran'ny matihanina rehefa ampitahainay amin'ny safidy fandoavam-bola hafa.
Lightworks ho an'ny Windows, MacOS, ary Linux
Lightworks dia iray amin'ireo programa tsara indrindra tafiditra ao anatin'ity lisitra ity, satria ity rafitra fanovana horonantsary ity dia be mpampiasa hamokarana horonantsary avo lenta toa ny LA Confidential, The Wolf of Wall Street ary Pulp Fiction.
Raha mijery akaiky ny endriny, ity mpanonta ity dia manana mpanitsy loko, vokatra mahatsiravina, sary nalaina matihanina sy media hafa tany am-boalohany.
Manana kinova maimaimpoana sy kinova aloa ianao hahafahanao manondrana rakitra MPED-4 amin'ny vahaolana 720p. Lightworks koa manolotra fitaovana karazana nentim-paharazana hafa manafatra, manapaka ary manitsy ary ny zavatra tsara dia ny fanaovanao azy amin'ny tsindry vitsivitsy.
Safidy lamaody hafa ity hanovana horonantsary fohy, satria azonao atao izany fanapahana, fandaharam-potoana ary sivana ary ny menio ho an'ny mpampiasa dia ahafahanao mitantana asa lehibe tsy tambo isaina.
Tombony iray hafa koa ny tsy fisian'ny habaka betsaka amin'ny solosainao, tsy toy ny programa hafa ao anaty lisitra. Misy ihany koa ny fanitarana samihafa hamonjy ny asanao.
Ity dia fitaovana tena tsara amin'ny fanitsiana Ary na dia tsy dia ara-barotra loatra aza izy io, dia manana fahaiza-manao goavana amin'ny fanitsiana ary tena tsotra interface tsara. Tianay ny hampitandrina anao izany tsy maimaim-poana ny fanohanan'ity programa ity, fa ny tonian-dahatsoratra manana fahaiza-manao tsara hifehezana hazavana, fampiasana sivana ary tetezamita hafa.
Tianay ny rindrambaiko noforonina tsara tarehy ary tena mora hitety. Izany dia mifanaraka amin'ny endrika AVI sy MAP4 Mba hanan-kery bebe kokoa amin'ny horonan-tsary sy ireo rakitra vokatr'izany dia azonao atao ny manangona azy ireo amin'ny findainao na amin'ny console.
Fampidirana azo ovaina ho an'ny youtube
Youtube dia ny fampitaovana lehibe amin'ny fampisehoana horonan-tsary manokana na orinasa ary raha misafidy ny hanao Intros ianao dia tsy maintsy manana kalitao tsara. Manaraka izany, manolotra pejy sy programa izahay hamoronana Intros tany am-boalohany, maimaim-poana ny ankamaroany.
Iray ity amin'ireo tranokala tsara indrindra hamoronana sy fanovana ny intro anao an-tserasera ho an'ireo tambajotran-tseraseranao toa ny Youtube ary azonao atao koa ny mampiditra lahatsoratra sy sary.
Betsaka ny zavatra azonao atao, toy ny mampakatra sy mampiditra horonantsary avo lenta ary miaraka amin'ny safidy hijerena alohan'ny hamoahana. Ianao koa dia manana ny Safidy hampakatra ny feonao manokana amin'ny endrika toy ny MP4 na izay endrika azonao ampiasaina.
Ny Free Intro Maker dia toerana misongadina hamoronana horonantsary ary maimaim-poana, saingy tsy zavatra mampihemotra ny endrika matihanina sy kanto izany, tena mora ampiasaina, misafidy lohahevitra iray ianao, mifidy lohanteny, singa, sary, URL, sns.
Afaka manana a topi-maso ny zavatra ataonao ary avy eo ampidino ny tambajotra sosialy amin'ny tambajotra sosialy.
Toerana tsara hafa hanaovana Fanovana intro ary mijery tena matihanina. Azonao atao ny mampiditra ny sary famantarana, karatra, isa anao ary maro hafa, ankoatry ny maha-ankafiziko ity programa ity, satria afaka mahita ilay horonan-tsary alohan'ny fisintomana ianao.
Ny horonan-tsary Panzoid tsara be ry zareo, miaraka amina lafiny tena matihanina ary ny zavatra tsara dia azo zahana manokana ny singa tsirairay. Ampidirina fitaovana iray Sarimiaina 3d izay azo ekena tokoa, fitaovana mendrika ampiasaina.
Rindrambaiko koa tena tsara ny mamorona horonan-tsary ary mandefa azy ireo any amin'ny Youtube. Ny singa rehetra dia azo namboarina ary hanaitra ny namanao sy ny mpanaraka ny tambajotrao ianao.
Intromaker.net tianay izany noho ny kalitao rehefa mamorona intro anao Ary na dia miaraka amin'ny sary mihetsika animated sy toy ny fitaovana hafa voalaza etsy ambony aza, azonao atao ny manana asa samihafa amin'ny fanaingoana: logo, horonan-tsary ary sary mihetsika hafa, ny vokatry ny asa dia tena matihanina ary ny zavatra tsara dia azonao atao ny mampiasa roa horonan-tsary ho an'ny tetikasanao.
Ity dia pejy iray hamoronana Intros maimaim-poana izay manome anao ny fahafaha mamorona ny intro in avo lenta miaraka amin'ny sary mihetsika animated.
Manolotra fiasa samihafa izy ireo toy ny fanaingoana ny logo amin'ny horonan-tsary na sarimiaina. Ho fanampin'izay, manampy sentra matihanina amin'ireo horonantsary izy, hahatratrarana vokatra tsara kokoa, ankoatry ny hoe mamela anao hampiasa horonan-tsary roa ho an'ny tetikasanao koa izy.
Mazava fa tia daholo isika mijery horonantsary sy sarimihetsika satria mampiala voly kokoa noho ny famakiana gazety, fa ny fizotry ny fanitsiana dia tena mankaleo sy mankaleo, asa midika fanoloran-tena mandritra ny ora maro ary indraindray aza dia lasa lafo be mihitsy.
Raha eo afovoan'ity fizotranao ity ianao dia manantena izahay fa amin'ny safidy hafa rehetra fanontana nomenay anao (maro amin'izy ireo no maimaim-poana na amin'ny vidiny ambany dia ambany), azonao atao ny misintona ny intro azo ovaina na manamboatra iray amin'ny rangotra. Fantatrao ve ny fitaovana bebe kokoa hanamboarana intro horonantsary azo ovaina?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Intros azo ovaina ho an'ny Adobe After Effects
mahavariana ... misaotra betsaka ...
Ale Danny dia hoy izy:
Valiny tamin'i Ale Dany
best1price2014risthian dia hoy izy:
tsy azo sintonina?
Mamaly an'i best1price2014risthian
yarien dia hoy izy:
Tsy afaka misintona azy ireo aho
Valiny tamin'i Yarien
azo ampiasaina ve izy ireo raha tsy misy olana momba ny zon'ny mpamorona?
Maricortez Fenoglio dia hoy izy:
Salama avy aiza no ahafahako misintona modely ho an'ny horonantsary magix
Valiny tamin'i Maricortez Fenoglio
majo gonzalez dia hoy izy:
aza misintona mamitaka anay fotsiny
Mamaly an'i majo gonzalez
ilay mpampijaly dia hoy izy:
HEVITRA HO AN'IZANY NO ZAZA VITADIAITO AZY IREO AMIN'NY PEJY TEMPLATE DS
Valio amin'i elMATON